ဝက်ခြံကြောင့် fix ဖို့ဘယ်လို? - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အကြံပြုချက်များ • အကြံပြုချက်များ Sant • လှပမှု ယင်းပြဿနာကိုဖြေရှင်းပုံကို "ဝက်ခြံ,
Alexis WAYAN 21 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2019
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏မကောင်းပါအမှတ်တရများ,ဝက်ခြံပုန်းများ ဒါ့အပြင်လူကြီးအတွက်ပြံ့နှံ့။ ဤအခလုတ်တခုတခုအပေါ်မှာ update ကို။
အဆိုပါဝက်ခြံပုန်းများ အနီရောင်ဝက်ခြံ, blackheads, whiteheads နှင့်ပြည်နှင့်ပြည့်စုံပင် cyst: ပုံစံအမျိုးမျိုးယူနိုင်ပါတယ်။ အရေပြားကိုမကြာခဏချောကျိကျိနှင့်အဆီပြန်အသွင်အပြင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့တစ်ခါတစ်ရံအရေပြားတစ်ခုဖောင်းကြွအကျိုးသက်ရောက်မှုပေးသောဟောင်းအမာရွတ်များခလုတ်သတိထားမိ။ ဝက်ခြံလွန်း sebum ထုတ်လုပ်ကြောင်း overactive ဆိကြည်ဂလင်းများကဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Sebum များသောအားဖြင့်ခြောက်သွေ့ဆန့်ကျင်အရေပြားကိုကာကွယ်ရန်အသုံးပြုသည်။ တစ်ဦးလှနျးလည်းမရှိသည့်အခါသို့သော်လည်း sebum ယင်းအပေါက်များနှင့်ခုံဖိနပ်အတွင်းစုဆောင်း။ အရေပြား oilier ဖြစ်လာသည်နှင့်ဘက်တီးရီးယား, ဝက်ခြံဖြစ်စေတဲ့နှစ်ခုအချက်များပွားနိုင်ပါတယ်။
ဆယ်ကျော်သက်ဝက်ခြံအားဖြင့်အထိခိုက်ဆုံးဖြစ်ကြသည်။ လူငယ်များ၏အကြောင်း 85% မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းတစ်ဦးသို့မဟုတ်ဝက်ခြံ breakouts ရှိသည်။ အမှန်စင်စစ်လွန်း sebum ထုတ်လုပ်မှုကိုမကြာခဏဟော်မုန်းအတက်အကျကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း, ထိုမညီမျှမှုဘုံများမှာ! လူကြီးများတွင်ဝက်ခြံများသောအားဖြင့်ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လူဦးရေရဲ့အကြောင်းကို 10% အဘို့, ဝက်ခြံပစ္စုပ္ပန်ရှိနေပါဦးမည်။ ဒါ့အပြင်တဦးတည်းရာသီသို့မဟုတ်ကိုယ်ဝန်စဉ်အတွင်းဝက်ခြံ breakouts တွေ့နိုင်ပါသည်။
အလှကုန်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်များအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်း။ အလွန်အကျွံမိတ်ကပ်သို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်များဆင်းရဲသားတို့ကိုရှေးခယျြမှု may နှောင့်ရှက်အသားအရေနှင့်ဝက်ခြံကိုတိုးမြှင့်။
အရေပြားနှင့်နီးစပ်သူအဆိုပါဆံပင်။ သငျသညျအဆီပြန်သောဆံပင်ရှိပါကကြောင့်လည်း overactive ဆိကြည်ဂလင်း၏လက္ခဏာသက်သေဖြစ်။ ဆံပင်အဆက်မပြတ်မိမိတို့၏မျက်နှာနှင့်ဝက်ခြံဒေသများမထိလျှင်ဒါ့အပြင်သူတို့ဘက်တီးရီးယားနှင့်ရောဂါကူးစက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏နည်းလမ်းဖြစ်လာပေမည်။
အဆိုပါစမျးတဝါးဝါးခလုတ်။ ထို့နောက်ရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့နှငျ့သငျဝက်ခြံ၏ပြန့်ပွားများ၏ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံး။ ပိုကောင်းတဲ့သူတို့ကိုမထိမခိုက်။
နေရောင်။ တစ်ခုမှာနေရောင်ယာယီအသားအရေနှင့်ဆိကြည်ဂလင်းခြောက်သွေ့ခြင်းဖြင့်ဝက်ခြံအသားအရေကူညီပေးသည်ထင်ပေမယ့်နေဆဲပြန်ဝက်ခြံပေလိမ့်မည်။ ငါတို့သည်လည်းကောင်းစွာနေရောင်ကာကွယ်ဆေး, ဝက်ခြံသို့မဟုတ်မနှငျ့ကြှနျုပျတို့၏အသားအရေကိုကာကွယ်ပေးရန်ဆက်လက်ရမည်ဖြစ်သည်။
အထူးမရှိထုတ်ကုန်, သင်၏အဆွေခင်ပွန်းအသုံးပြုသူတို့အားသို့မဟုတ်ကောင်းသောခံစားရတဲ့သူတွေကို! အဘယ်သူမျှမကျွန်တော်တို့ရဲ့အသားအရေအမျိုးအစားအဘို့အညာဘက်ကိုထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဂရုတစိုက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖယ်ရှားပေးပါသည်။ ဒါဟာအစအပေါက်ခုံဖိနပ်တော်မမူကြောင်းဝက်ခြံအသားအရေများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထုတ်ကုန်ကိုရွေးကောက်ပြီး။
ဒါဟာလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်နံနက်နှင့်ညနေပိုင်းလုပ်ဆောင်ပေမယ့်မျိုးစုံတို့ဆေးလျော့နည်းဆီပြန်အသားအရေအောင်အတွက်အောင်မြင်ဖို့လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ရန်မှားယွင်းနေသည်။ လည်းဆိကြည်ဂလင်းကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သော အကယ်. ဥပမာဆေးအသုံးပြုပုံသူတို့ကပို sebum ထုတ်လုပ်ရန်စတင်ပါလိမ့်မယ် ...
ဆံပင်နှင့်အတူတစ်ဦးထုပ်ဝတ်ဆင်ထား, headband, မျက်မှန်, etc ပဲဖြစ်ဖြစ်, သတိပြုရကြမည်။ ဒါပေမယ့်အရေးအပါဆုံးလည်းမကြာခဏငါတို့လက်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာများကိုထိကိုရှောင်ရှားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးအထက်, ဝက်ခြံ pop ဖို့ကြိုးစားဘယ်တော့မှ; ကျွန်တော်သစ်ကိုကျိန်းစပ်ကိုအန္တာရာယ်။ ပိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိခလုတ်, ပိုမိုရောဂါပိုးကျန်းမာဇုန်ညစ်ညမ်းစေရန်လုံလောက်သောကံကောင်းဖြစ်ကြသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ acneic အသားအရေများအတွက်သည့်အခါမဂ္ဂဇင်းထုတ်ကုန်, တဦးတည်း benzoyl peroxide သို့မဟုတ် salicylic acid ်ရှိသူများ, အရေပြား exfoliate နှင့်ဘက်တီးရီးယားများပြန့်ပွားတားဆီးရာနှစ်ခုဒြပ်ပေါင်းများကိုအဘို့အ opts ။
SOURCE မှ: ဘဝ
တစ်စက္ကန့်ကလေးသူငယ်ရှိသည်ဖို့မမိဘများအပြစ်တင်ရပ်တန့် - နောက်ထပ်ကျန်းမာရေး MAG